चाकडिको गुरु बिरालोकी मान्छे ?? - ConfuseNepal
११ कार्तिक २०७५, आईतवार ११ कार्तिक २०७५, आईतवार कन्फ्युजनेपाल0Comments
विकेन्डको दिन भएकोले ज्यानले मागेजतीनै सुतौला भनेर आज सुत्नुअघी मोबाइलमा अलराम लाएको थीइन । बिहान ७बजे मात्रै आँखा खुलेसंगै ब्युझिएँ । हातमुख धोएर ब्ल्याक कफी तयार गरेँ । कफि लिदै ज्यानलाइ स्फुर्त बनाउन बिहानिको शितल हावाको स्पर्श गराउनुपरो भन्ने सोँचेर घरबाहिर पलेटिमा निस्किएँ । कफी सुरुप्प सुरुप्प पार्दै अाइफोनमा फेसबुक र भाईबर कोट्टाउदै बसिरहेँ । साथीहरुको कुनै रमाइलो, अनौठो अनी कुनै दु:खद पोस्ट र मेसेजहरु हेर्दै भुलीदै थिएँ । एक्कासी मेरो खुट्टामुनी केही नरम चिजले लामो स्पर्स गर्‍यो । झसँगै भएँ यसो हेरेको “म्याउ” गर्दै बिरालो मेरो खुट्टामा ढेसिएर दाँयाबाँया गर्दै रहेछ । मेरो ध्यान भंग गरेकोले अलिअली रिस पनि उठ्यो । “पर भाग” भन्दै दुइतिनपटक हातले खेदेको संकेत दिएं । तर बिरालो “म्याउ म्याउ “ गर्दै खुट्टामा वरीपरि ढेसिरह्यो । मबाट टाढा जाने कुनै छाटकाट देखिन । मेरो खुट्टा मसाज गरेजसरी गुडुल्किरह्यो लाडे स्वरमा म्याउम्याउ गरेर । मैले अनुमान गरेँ उसलाई ज्यादै भोक लागेको छ । ऊ चाहन्छ मेरो मन पग्लियोस र खाने कुरा देअोस् । यसो सम्झिएँ बिचरा उस्को भाषामा यसरी बिन्ती गर्दैछ केही खाने कुरात दिनै पर्‍यो धर्मनै हुन्छ । भित्र गएर बेलुकी उप्रीएको फ्रिजभित्रको मासु लिएर आएँ । “बिरालोहरुलाई खाने कुरा नदीनु” केही महिना अगाडि पल्टनबाट आएको उर्दी सम्झिएँ । यँहाको बिरालोहरुलाई कुनै रोगबिरुद्दको सुई हानिएको हुन्न त्यही भएर त्यसले आक्रमण गरेमा रोग लाग्छ भनेर बिरालोहरु भरसक लोभ भएर जाअोस भनेर हाम्रो हितको निम्ती उर्दी जारी गरिएको थियो ।तर बिरालोको त्यो अवस्था र मप्रतिको व्यबहार देखेर अघी मेरो मनमा मानबता मैनबत्ती झै पग्लेर चुहिरहेको थियो । कसैले देख्दैनन क्यारे भनेर मासु भुइमा राखिदिएँ । टन्न खाएर बिरालो म्याउ गर्दै मासुको अन्तिम चौटा चपाउदै थियो । परबाट पार्किङ् गरेको कारको पछाडिबाट अर्को बिरालो म्याउ गर्दै म र पहिलो बिरालो भएको ठाउतिर दौडिदै आयो । मेरो हातमा थप मासु थिएन नत मासु पाउनलाई उसले पहिलो बिरालोजस्तो बिनम्रतानै देखाएको थियो । नजीकमा लडिरहेको मेसिङ् पकाउन ल्याएको दाउरा उठाएर धपाउनलाई झट्टी कसीदिएँ । बिरालो डराएर अघी ऊ आएकै दिशातिर भाग्यो । कार पछाडि गएर एउटा १ मिटरजत्तिको डोरी मुखमा च्यापेर परतिर जादैथियो । डोरिजस्तो चिज के रहेछ मनमा कौतुहलताको पहाड उभियो । नजीकै गएर हेरेको छांगाबाट झरेजस्तै भएँ । त्योत बिसालु सर्पपो रहेछ । सायद राती त्यो सर्प हाम्रो घरभित्र छिर्दै थियो वा छिर्न सक्थ्यो । नत बिरालोले सर्पनै खान्छ शायद हाम्रो सुरक्षाको निम्ती उसले त्यो जोखिम मोल्यो । मैले त्यो दृस्य देखिन त्यही भएर एकछिन मेरो ज्यानमा ढेसिदै म्याउ म्याउ गर्ने बिरालोले पेट फुट्नेगरेर खान पायो तर बिचरा हाम्रो सुरक्षा गर्ने बिरालोले मेरो झट्टी खानुपर्‍यो ।
कताबाट भुपी शेरचनको कबिता याद आयो
हरेक रंगीन चरालाई देख्दा
वनको मयूर भन्न मन लाग्छ
हरेक पहेंलो धातुलाई देख्दा
सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ
यस्तो बानी परिसक्यो अब त
कुनै गधालाई देख्दा पनि
हजुर भन्न मन लाग्छ ।
भुपिले यि हरफहरु त्यतिकै लेखेका होइनन् । हिजो देखी आजसम्म संसार चाकडी गर्ने र गरिमाग्ने प्रथाले ग्रस्त छ । चाकडीमा लिप्त राजनीति, खेलकुद, प्रशासन र आप्नै परिबेश मनमा नाच्न थाले ।
मान्छेको चाकडिले ढुङ्गाबाट देउता बनेकाहरु र बनाइएकाहरु सम्झिएँ । राजतन्त्र ढलेपनी अस्ती भरखर दसैंमा राजालाई पुज्न लाइनमा उभिएकाहरु, घुडाको कपडा फाट्ने गरेर धनुस्टन्कार आसनमा टिका थाप्ने र कुर्सिमा बसेर टिका लाइदिने हाम्रो राष्ट्रपती । महिना दिन अगाडि मैले पढेको एक भुपु ब्रिटिश आर्मिले आफ्नो पुस्तक लाइफ अफ स्कडीमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन् । जहाँ त्यो रेजिमेन्टको महिला रेक्रुटिङको बारेमा अनौठो रहस्यहरुपनी खुलाइएको छ । कमान्डरहरुले आफुसँग नजिक हुने, बोल्ने हिमचिम गर्ने सारीरिक सुख दिने महिला रेक्रुटहरुलाई राम्रो रिपोर्ट लेखिदिने नत्र रिपोर्ट बिगारिदिने यात अनाबस्यक सजाय दिएर जब छाड्ननै बाद्य बनाइएको घटनाहरुको पर्दाफास गरेका छन् । अरु टाढात के जानु म आँफैत भरखर बिरालोको चाकडिले गर्दा गलत डिसिजन गर्न पुगें । एकछिन मेरो ज्यानमा ढेसिदै म्याउ म्याउ गर्नेलाई टन्न मासु तर सर्प मारेर हाम्रो ज्यान जोगाउने बिरालोलाई झट्टी खुवाएर पठाएको थिएँ ।
जेहोस् जसरी घुस लिने र दिन्या दुबै अपराधी हुन् भनिन्छ त्यसरिनै चाकडी गर्ने र गरिमाग्ने दुबै अपराधी हुन् । किनकी चाकडी प्रथाले राम्रो काम गर्नेहरुको कला त्याग र योगदानको दिनानुदिन हत्या गरीरहेको हुन्छ । संसार घुमेर आउने कुबेर छायामा अनी बाउ आमा वरिपरि घुम्ने गणेश सधैं मायामा परिरहन्छन् । अहिले यो बिरालोको घटनाले मनमा प्रश्न उठिरहेछ चाकडिको गुरु मान्छेकी बिरालो होला ??
← दिपा तामाङको मेरो गीत बजारमा
अर्चना पनेरुको चलचित्र जिस्म २ धमाधम छायांकन →
प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिए, …
रुपन्देहीमा प्रेस सेन्टर नेपालको भेलाः पत्रकार सुर…